Banaan bax lagu taageeraayo Raascasayr State oo ka dhacay Caluula | raascasayrmedia.com
← Raascasayr State oo lagu dhawaaqay
Dagaal qasaaro gaystay oo ka dhacay Muqdisho iyo guulo lakala sheegtay →
April 18, 2011 · 3:57 pm
Banaan bax lagu taageeraayo Raascasayr State oo ka dhacay Caluula
Shacabka ku dhaqan Magaalada Caluula ee caasumada gobolka Raascasayr ayaa maanta isugu soo baxay Banaan bax ay ku soo dhowaynayaan Maamulka cusub ee shalayto laga dhawaaqay deegaanadaas .
Shacabka ayaa waxay isu soo baxaan ka dhigeen fagaaraha wayn ee xarunta Madaxtooyada Raascasayr State ee magaalada Caluula .
Shacabka ayaa ahaa kuwo shucuur aad u sarayso waxayna wateen boorar ay ku qoran tahay Raascasayr State .
Mid ka mid ah dadki soo agaasimay isu soo baxaan oo aan wax ka waydiinay sida uu u arko Maamulka Cusub ee deegaanada gObolka Raascasayr Yeelanayaan ayuu yiri ” waan ku faraxsanahay waana soo dhowaynayanaa waxaana la garab taaganahay hiil iyo hoo waxaana u rajaynayanaa madaxga Maamulka kuwo horumarkeena ”
Ciimada amaanka ayaa dhex joogay isu soo baxayaasha ,banaan baxaan lagu taageeraayo maamulka Cusub ayaa si jawi wanaagsan ah ku soo dhamaaday .
2 responses to “Banaan bax lagu taageeraayo Raascasayr State oo ka dhacay Caluula”
Waxaan ii cadaatay inay Somali doonayso in ay isu maamulaan iskood oo
miyi iyo magaalaba ay dadwaynaha helaan adeega iyo nabada loo baahi qabo,iyadoo la dhowraya midnimada Somaiyeed.
Waana wax lagu farxo in dadka Somaliyeed ee dega degaanada balaaran ee ilaah bad iyo miyiba ku manaystay inay ku dhawaaqan is mamul la yiraahdo Casayrland State of Somalia taasoo wax ka tari doonto dhul Somaliyeed oo u baahi qabo wax qabad iyo mamul hufan.
Waxaan idin leeyahay guulaysta iskana dhega tira waxii maamul iyo nabad diid ah,waxaa is huran dhul iyo dadkiisa.
Somaliya ha noolaato hana is raacdo dulikana ha dhamaado meeshuu ka jiraba.
Runtii waxa ii muuqata saan saan ah inay soomliya soo labanyso madama uu qofwalba xuquudiisa doonayo iyo mida soomalinimo waxan jeclahay in uu mamulkan yahay mid ka shaqnaya isu soo celinta somali wayn wana soo dhowaynaya waxan leeyhay guul ayaad gaaraysan reer raasicaseyr sate hambalyo iska diida laaluush walgu duloobaa …..